Aviasales waxay soo saartay hage dib loogu furayo wadamada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Aviasales waxay soo saartay hage dib loogu furayo wadamada
Aviasales waxay ku kordhisay codsigeeda socdaal hage "Ok to go" kaas oo ka jawaabaya su'aasha "Miyaa la ii oggol yahay inaan safro?" iyadoo xogta laga helayo ilo rasmi ah.
Isticmaalayaashu waxay heli karaan xog ballaaran, laga bilaabo qiimaha diyaarada ilaa xayiraadaha COVID-19 ee gobol kasta.
Waxay ka kooban tahay dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah: haddii waddan u furan yahay dalxiisayaasha, sida loo tago, haddii karantiilku marka la yimaado ay qasab tahay, nooca caymiska COVID-19 ama baaritaanka loo baahan yahay.
Nidaamyada kale, sida xeerarka waji-xidhka, bandow, saacadaha ay furan yihiin makhaayadaha, iwm. waa la hirgeliyay.
Kooxda la magacaabay waxay si joogto ah u falanqeeyaan oo u cusbooneysiiyaan macluumaadka ku saabsan dalalka dib loo furay iyo shuruudaha gelitaanka. Tilmaamuhu si buuxda ayaa loogu daraa alaabta - xayiraadaha safarka ayaa soo muuqda oo ay weheliyaan weydiimaha raadinta. Markaa hadda wixii ka dambeeya, isticmaalayaashu waxay heli karaan xog baaxad leh, laga bilaabo safarka hawada ilaa xayiraadaha COVID-19 ee gobol kasta.
"Ok to go" waxaa ku jira dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah: haddii waddan u furan yahay dalxiisayaasha, sida loo tago, haddii karantiil marka la yimaado ay qasab tahay, nooca caymiska COVID-19 ama baaritaanka loo baahan yahay, iyo qaabab kale. Kala duwanaanshaha shuruudaha u dhexeeya gobollada kala duwan ee hal dawlad ayaa sidoo kale la tixgalinayaa. Tusaale ahaan, New York waxay u baahan tahay karantiil marka la yimaado, halka Miami aysan samayn, iyo Aviasales waxay muujinaysaa dhammaan khilaafaadkan.
Nidaamyada kale, sida xeerarka waji-xidhka, bandow, saacadaha ay furan yihiin makhaayadaha, iwm. ayaa lagu hirgeliyay adeegga cusub.